ShweMinThar: Meizu Note9Review (ပြိုင်ဘက်ကောင်း)
ဈေးနှုန်: = ၃သိန်း ၁သောင်း ၉ထောင် ကျပ် (64/4 GB Version)
ဖုန်းအကြောင်းမပြောခင် အရင်ဆုံး Meizu Myanmar အကြောင်း နဲနဲပြောကြည့်မယ်ဗျ။ တကယ်တော့ လတ်တလော ဒီကိုဝင်နေတဲ့ Note9တွေက Official ဆိုပေမယ့် Global Version မဟုတ်ပဲ China Version အလုံးတွေပါ။ ဘာကြောင့် ခုလိုဖြစ်ရလဲ? သမိုင်းကြောင်းပြန်လှန်ရရင် အရင်က Meizu Smartphone တွေဟာ Launch လုပ်ပြီး အတော်ကြာမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်လေ့ရှိတယ်။ အဓိကအကြောင်းရင်းက Global Launch ကို စောင့်နေရတာကြောင့်ပါ။ Meizu ရဲ့ Parent Company က ထုတ်လုပ်မှုနောက်ကျရတဲ့အထဲ ဒီကိုရောက်ဖို့ထပ်စောင့်ရတာကြောင့် မြန်မာပြည်ဈေးကွက်မှာ Meizu ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေထက် ခြေတစ်လှမ်းမက အမြဲနောက်ကျခဲ့ရတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Meizu က ဒီအားနည်းချက်ကို ပြောင်းလဲပစ်ချင်ပုံရတယ်။ ဒီတော့ Fan တွေသွေးမအေးသွားခင် အရင်ရတဲ့ China အလုံးတွေအရင်သွင်းလိုက်တယ်။ ဒီအတွက် Meizu ရနိုင်တဲ့ အားသာချက်နှစ်ခုရှိတယ်။ ပထမအချက်က ဈေးကွက်ကို အချိန်မီ ခြေချနိုင်လိုက်တာ။ Meizu Note9ဟာ Redmi Note7ကို အဓိကယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပေမယ့် Global Launch ကိုသာ စောင့်လိုက်ရင် ဒီဈေးကွက်မှာ Note7Pro နဲ့အပြိုင်၊ ဒါမှမဟုတ် နောက်မှ ရောင်းရနိုင်တဲ့အခြေအနေက Meizu အတွက် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ဈေးနှုန်းပိုင်း။ Region ကွာဟမှု၊ ငွေလှဲလှယ်နှုန်း စတဲ့အချက်တွေကြောင့် China အလုံးတွေဟာ ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာ သေချာပေါက်ပိုသက်သာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Meizu Myanmar အနေနဲ့လည်း Note9ကို Competitive Price နဲ့ရောင်းနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပိုရသွားစေခဲ့တယ်။
ဒီတော့ Note9ကို ဈေးကွက်ထဲ အချိန်မီသွင်းလိုက်နိုင်ခြင်းဟာ Meizu Myanmar အတွက် အရွေ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသလို မကြာခင်ထွက်ရှိမယ့် Meizu 16s Flagship Series အတွက်လည်း ကြိုပြီးလမ်းစဖောက်လိုက်သလို ဖြစ်နေတာကြောင့် ခဲတစ်လုံး ငှက်နှစ်ကောင်ထိတာပါပဲ။ Flyme OS က China Version ဖြစ်နေပေမယ့် Google Service ထည့်ရလွယ်သလို Zawgyi Font လဲ ထည့်ရလွယ်ပြီး Chinese Apk အားလုံးလိုလိုကလည်း ဖျက်ခွင့်ပေးထားတာကြောင့် User တွေအတွက် သိပ်ပြီးခက်ခဲမယ်လို့မထင်မိ။ ဆိုတော့ကာ Plan က ဟုတ်သွားပြီ၊ လိုရင်းလဲချော်နေပြီဆိုတော့ Meizu Note9ဟာ Redmi Note7ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကောင်း တကယ်ဖြစ်မလားဆိုတာ Review နဲ့ စလိုက်ကြတာပေါ့။
ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်း သလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့် Note9ဟာ Design ပိုင်းအရ အတော်ဂွမ်းတယ်တဲ့ Meizu ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေပါတယ်။ (သူ့ရှေ့ကထွက်ထားတဲ့ Note 8 ကတောင် ပိုလှတယ်လို့ မြင်မိတယ်။) ပြီးတော့ Meizu ဖုန်းအဆက်ဆက်မှာ ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ဟန်ပန်တစ်ခုက Note9မှာ ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး ဝင်စေတယ်။
Meizu ကတော့ အရင် Note Series တွေနဲ့မတူအောင် သူ့ရဲ့ Built Material ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ နောက်ကျောဘက်က အရင် Metal နေရာမှာ Gorilla Glass ဖြစ်လာပေမယ့် ဘေးဘောင်တွေကတော့ Plastic ဖြစ်သွားတယ်။ ကျောဘက်ဘေးဘောင်တွေကို နဲနဲကွေးပေးထားတယ်ဆိုပေမယ့် လက်ထဲကိုင်ကြည့်တဲ့အခါ ပွယောင်းယောင်းနဲ့ တစ်သားတည်းမဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကို ရတယ်။
အားမရဆုံးကတော့ သူ့ရဲ့ Color ရွေးချယ်မှုပါ။ 2019 ရဲ့ Trend ဖြစ်နေတဲ့ Gradient Color ကို ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုရင် လက်ခံပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘောင်တွေကို Metal ဆန်အောင် ငွေရောင်လုပ်ထားတာက ကျောဘက် Color နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Meizu Note9ဟာ Design ပိုင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ထွက်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ အနီးစပ်ဆုံးနှိုင်းပြရရင် Redmi Note7ရဲ့ Gradient မဟုတ်တဲ့ All Black က ကိုင်ရတာပိုခန့်ထည်တယ်လို့ ခံစားမိနေတယ်။
ဒါပေမယ့် Meizu ရဲ့ အားသာချက်တွေအနေနဲ့ အရွယ်အစား ပိုပြီးသေးတာ၊ 4,000 mAh ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ Weight အတော်လေးပေါ့တာ၊ နားကြပ်ပေါက်က အောက်ဘက်မှာပါနေတာ၊ Button တွေ Clicky ဖြစ်တာ စတဲ့ သဘောကျစရာလေးတွေ ရှိနေပြန်တယ်။ ဒီတော့ Structure နဲ့ Material ပိုင်းမှာတိုးတက်လာသလောက် Old Skool ဆန်နေတဲ့ Note9ကို Design ပိုင်းအတွက် ဦးစားပေးဝယ်ချင်ရင်တော့ အပြာရောင်တစ်ခုထဲကပဲ နဲနဲကြည့်ရအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတယ်။
Redmi Note7နဲ့ယှဉ်ရင် Meizu ကို အသာရစေတာက သူ့ရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်ပါ။ သူတို့မှာ အပေါ်ဘက်ဘောင်အရွယ်အစားက အတူတူဆိုပေမယ့် Waterdrop Notch မှာတော့ Meizu က သိသိသာသာကို သေးတာတွေ့ရတယ်။ (သူ့ Notch က Mi9ထက်တောင် ပိုသေးသဗျ) ပြီးတော့ Chin ကလဲ Note7ထက် ပိုသေးတယ်။ ဆိုတော့ ရှေ့မျက်နှာပြင် Design က Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာထက်ကို ပိုသပ်ရပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် Note9ကို Mid-range မှန်း သိသာသွားစေတာက သူ့ရဲ့ Display ပါ။
သူ့ရဲ့ 6.2”, 1080p+ IPS LCD Display က Level တူ Mid-range တွေထက် ပိုမှိန်တာကို သတိထားမိတယ်။ ညဘက်လိုအချိန်မျိုးမှာတောင် Brightness ကို 50% လောက် ထားမှအဆင်ပြေတယ်။ ဒါက နေရောင်အောက်မှာ သုံးမယ်ဆိုရင် စကားပြောလာနိုင်တဲ့အချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့တော့ Note9Display ကို မကောင်းဘူးပြောမရပြန်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Dull ဖြစ်တဲ့ Theme Icon တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် Display ကို Color စိုစိုနဲ့မှ သုံးနေကျသူတွေအတွက် ဖွယ်တယ်ထင်နိုင်ပေမယ့် သူ့ Display က Color Accurate ဖြစ်တာကို လိုချင်သူတွေအတွက် သဘောကျစရာဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ (Xiaomi မှာလို High Contrast Mode ဘာညာပြောင်းဖို့ Setting မပါတာကတော့ Software ပိုင်း အားနည်းချက်လို့ပြောရမှာပေါ့) ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ Black Level ကလဲ LCD Display အနေနဲ့ အတော့်ကိုအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။
ဒီတော့ Color Accuracy နဲ့ပတ်သက်ရင် Natural ဖြစ်တာကို သဘောကျတတ်သူတွေအတွက်တော့ Meizu Note9ကို ရွေးချယ်မယ့်အထဲ ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
၃ သိန်းဝန်းကျင်မှာ In-Display Fingerprint ကို မှန်းရင်တော့ မိုက်ရူးရဲဆန်ရာ ကျသလို Quality ပိုင်းမှာလဲ ကောင်းမွန်ဖို့မသေချာပါဘူး။ Meizu Note9ရဲ့ ကျောဘက်က Fingerprint Scanner ဟာ Mid-range မှာ အမြန်ဆုံးမဟုတ်သည့်တိုင် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြီး Secure လဲ ဖြစ်တယ်။ (Fingerprint နေရာလေးက နဲနဲတိမ်တာကတော့ ပြောစရာအချက်လေးပေါ့) ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ 2D Face Unlock ကလဲ မြန်သင့်သလောက် မြန်တဲ့အပြင် အမှောင်မှာလဲ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ Mid-range မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ Security နဲ့ ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ သဘောကျမိတဲ့အချက်ကတော့ သူများတကာက ကိုယ့်ဖုန်းကို Unlock လုပ်ဖို့ကြိုးစားရင် Facial Recognition က ၅ ခါလောက် Scan ဖတ်ပြီး ကိုယ်မဟုတ်မှန်းသိတဲ့အခါ Screen off ပြီး ပြန် on ရင်တောင် Face Unlock ပေးမလုပ်တော့တာပါ။
Meizu Note9ဟာ Flyme 7.2 နဲ့ Android Pie ကိုအခြေခံပြီး ပွဲထွက်လာတဲ့ ပထမဆုံး Meizu Phone ဖြစ်လာတယ်။ လက်ရှိစမ်းနေတဲ့ Version 7.2.2.0 A ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ Update ပေးထားပြီဆိုပေမယ့် လက်ရှိ Version ရဲ့ Stability ကို သဘောကျလို့ မတင်ပဲ စမ်းဖြစ်သွားတယ်။ Bloatware ပိုင်းမှာတော့ MIUI လိုပဲ Meizu Store နဲ့ News တို့လောက်ကလွဲရင် Chinese Apk တွေ အကုန်နီးနီး ဖျက်ခွင့်ပေးထားတယ်။ User Experience အနေနဲ့ Scrolling, App အဝင်အထွက်, Multi-tasking တွေမှာ Smooth ဖြစ်အောင် အလုပ်လွန်သွားပြီး နှေးနေတာကို သွားသတိထားမိတယ်။ (Developer Option ထဲက Animation Speed ကို 0.5 ထားမှ သုံးရအဆင်ပြေသွားတယ်)
သူ့ Setting ပိုင်းက FunTouch တို့ Color OS တို့ထက်တောင် ပိုပြီးရိုးရှင်းတယ်။ Navigation Bar နေရာမှာ Meizu ရဲ့ mBack အပြင် Easy Gesture လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ MIUI မှာလို Gesture မျိုးလဲ ထည့်ပေးထားတယ်။ ဒါက ရွေးချယ်စရာ ပိုများစေပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ဟန်အပေါ် မယုံဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဝင်လာစေတဲ့အချက်ဖြစ်နေပြန်တယ်။ တခြားအနေနဲ့ Accessability ထဲက Gesture တစ်ချို့ကလွဲရင် ကလိစရာကြီးကြီးမားမားမတွေ့မိ။
Meizu Note9ရဲ့ Flyme မှာ သဘောအကျမိဆုံး အချက် ၃ ချက်ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်က Edge Function လို့ ခေါ်ရမလားပဲ။ ဘေးဘောင်တစ်ဖက်စီကို အပေါ်၊ အောက် ပွတ်ဆွဲရင် ဖုန်းမှာရှိတဲ့ Apk တွေကို A to Z ပြပေးတာ။ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Apk တွေ့ရင် Icon အထိ လက်ကို ပွတ်ဆွဲဖွင့်ရုံပါပဲ။ ဒီအချက်က App Drawer သီးသန့်မလိုပဲ လိုချင်တဲ့ Apk ကို အလွယ်တကူ ဖွင့်သုံးဖို့ အတော်အသုံးတည့်တဲ့ Feature လို့ မြင်တယ်။ ဒုတိယအချက်က Night Mode ပါ။ အခုဆို UI အတော်များများမှာ Night Mode ကိုယ်စီပါနေပြီမို့ သိပ်မဆန်းတော့ပေမယ့် Meizu ရဲ့ Night Mode က လုံးဝ System-wide နီးနီးလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။ သုံးကြည့်သလောက် Facebook, Google Playstore တို့အထိ် နဂို အဖြူနေရာတွေကို လိုက်မဲပေးတာ အားရစရာ။ (MIUI ရဲ့ Dark Mode မှာတောင် အဲလို မမဲပေးနိုင်သေး)
ဒါပေမယ့် သူ့အမဲရောင်က True Black မဟုတ်ပဲ ညဘက်စာကြည့်ရင် အဆင်ပြေဖို့လုပ်ပေးထားတဲ့ အမဲဖျော့ဖျော့ပါ။ ဒီတော့ AMOLED Display သုံးမယ့် Flagship တွေမှာ True Black ရနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ အရမ်းထူးဆန်းတာမဟုတ်ပေမယ့် Bold System Font ကို on နိုင် off နိုင်တာလေး သဘောကျမိတယ်။ ခုလိုကောင်းတာတွေပြောနေလို့ Flyme က လုံးဝပြည့်စုံပါတယ်လို့ ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ အင်တာနက်ချိတ်လိုက်ရင် Browser, Theme Store ဘာညာတွေက တရုတ်စာတွေနဲ့ Noti တွေတက်လာတာ၊ Screenshot အတွက် Gesture မပါတာ၊ Video App မှာ Online Service ပိတ်ထားရင်တောင် Online TV Tab တွေပွင့်နေတာ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဒီတော့ Flyme အနေနဲ့ လက်ရှိစမ်းကြည့်သလောက် အတော် Stable ဖြစ်လို့ လုံးဝအငြိမ်၊ Error ကင်းကင်းသုံးချင်ရင်တော့ ရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Meizu Note9ရဲ့ Single Speaker က စစမ်းစမ်းချင်းမှာတော့ အတော်လေးအသံကျယ်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သီချင်းတွေဘာတွေ ဖွင့်စမ်းချိန်မှာ သူ့အသံက အတော်လေး Flat ဖြစ်တယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ Bass အပိုင်းတွေပျောက်သလို High Volume မှာလဲ Distortion တွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Vocal ပိုင်းအတော်အောင်တာကြောင့် Review Video, Vlog ဘာညာကြည့်ရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ။
2019, March လောက်ကနေ နားကြပ်နဲ့အသံပိုင်းစမ်းတဲ့အခါ Mi In-ear Pro HD နဲ့စမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေ အတော်ကံကောင်းတယ်ပြောရမလားပဲ (နားကြပ် Review လဲ လာဖို့ရှိပါတယ်။) ဒီတော့ Note9နဲ့ Audio ပိုင်းက Mid-range မှာ အတော်လေးအားရဖို့ကောင်းတဲ့အနေအထားလို့ ပြောရမှာပါ။ သူ့မှာ မပြောပလောက်တဲ့ အားနည်းချက်ဆိုလို့ Mids တွေက တခြားအပိုင်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် မဆိုစလောက်တိုးနေတာလေး တစ်ခုပါပဲ။ Volume ပိုင်းသင့်တင့်တယ်၊ Separation ကောင်းတယ်။ အမိုက်ဆုံးက Treble နဲ့ Vocal ပါ။ Bass အပိုင်းကိုတော့ သိပ်သည်းကျစ်လစ်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ Equalizer ဘာညာမညှိရသေးခင်မှာတောင် သူ့ရဲ့ Audio Quality က Mid-range မှာ အတော်ကောင်းတဲ့ Level တစ်ခုကို ရောက်နေပါပြီ။
ဒီအချက်က စာရွက်ပေါ်မှာရော လက်တွေ့မှာပါ Redmi Note7ကို အသာရစေမယ့် Meizu Note9ရဲ့ အားသာချက်ပါ။ Snapdragon 675 က Performance ကို Boost လုပ်ပေးတဲ့အတွက် Daily Usage မှာ အတော် Smooth ဖြစ်သလို Efficiency ပိုင်းမှာလဲ သိသိသာသာကောင်းမွန်တာ တွေ့ရတယ်။ PUBG ကို စလာကတည်းက High Setting နဲ့ခွင့်ပြုထားသလို ဆော့နေချိန်မှာလည်း Cover တပ်မထားတောင် နွေးရုံပဲခံစားရတဲ့အထိ Thermal Control ကောင်းတယ်။
Performance နဲ့အပြိုင်လိုက်ကြမ်းတာက သူ့ရဲ့ Battery Life ပါ။ 50% Volume နဲ့ Brightness မှာ 720p Video 1hr ကို 7%, Youtube 1hr (wifi) ကို 9% က သိပ်မဆန်းပေမယ့် PUBG 1hr (wifi) ကို 15-17% က နှစ်ခါပြန်စမ်းရလောက်အောင် အံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ Stand-by Battery Life ကလဲ အတော်ခံတဲ့အထဲပါတယ်။ 8hr ကို 2% လောက်ပဲလျော့တဲ့အပြင် တစ်နေကုန်ပစ်ထား၊ ဒါမှမဟုတ် Wifi ချိတ်ထားတာတောင် Battery Drain မဖြစ်တာက အားရစရာပါ။
သူ့မှာ Meizu ရဲ့ 18W Fast Charging ပါပြီး 30min ကို 29%, 1hr ကို 59% နဲ့ 10-100% ကို ၂ နာရီလောက် အားသွင်းရတယ်။ ဆိုတော့ အားခံတာနဲ့ ပြန်ချိန်ကြည့်ရင် သူ့အားသွင်းချိန်က ကြာပျော်သလို Mid-range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ Note9ရဲ့ Performance က Gaming အသားပေးရွေးချယ်သူတွေအတွက် ကျေနပ်စရာ ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။
Meizu Note9ကြေငြာတော့ SOC ကျ SDG 675 သုံးပြီး Camera Sensor ကျ Samsung GM1 ဆိုတော့ ဘာလားပေါ့လို့ အတွေးဝင်ခဲ့သေးတယ်။ (ဒါပေမယ့် ဒီဈေးမှာတော့ ဒါဟာ လက်ခံပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားလို့ ဆိုရမှာပါ) ဒါပေမယ့် လက်တွေ့သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာ သူ့ Camera ပိုင်းက ထင်ထားသလောက် အားမရတဲ့အချက်တွေကို တွေ့လာရတော့တာပဲ။ ကောင်းတဲ့အချက်တွေအရင်စပြောရရင် သူ့ Focus က အဝေးကို Auto ယူထားတာများတော့ ပြတင်းပေါက်၊ တံခါးပေါက်တို့ကနေ အပြင်ကို ပုံလှမ်းရိုက်တာမျိုးမှာ အလင်းဖွာတာမျိုး သိပ်မတွေ့ရပဲ Exposure မျှတာ တွေ့ရတယ်။ Dynamic Range ကလဲ Mid-range အနေနဲ့ မဆိုးလှ။ Color ပိုင်းကတော့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ Saturation လေးတွေရှိပေမယ့် Overall မှာ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိတယ်။
အားမရတာက သူ့ရဲ့ Noise Level ပါ။ အလင်းကောင်းကောင်းနဲ့ Indoor Condition မျိုးမှာတောင် Noise သိသိသာသာထတယ်။ Daylight ပုံတွေမှာလည်း အရိပ်ကျတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ Noise တွေတွေ့ရတယ်။ နောက်တစ်ချက်က Focus မပြတ်တာ။ အထူးသဖြင့် Focus အပြောင်းအလဲမှာ အတော်နှေးပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်တိုင်ပြန်ထောက်ရတာမျိုး ခဏခဏကြုံရတယ်။ ဒါကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်မိတာပဲ။
Low Light အတွက် Note9မှာ Night Mode သီးသန့်ပါလာပြီ။ သူ့ရဲ့ Approach က Xiaomi ရဲ့ Night Mode နဲ့ဆင်တယ်။ ရိုက်ချိန်မြန်ပြီး အလင်းတွေဝပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အလင်းနဲရင် ထင်သလောက်အဆင်မပြေပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Shadow Area တွေ ပိုမှောင်သွားတာ၊ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ Detail ကျတာဆိုတော့ G Cam တို့လိုအရမ်းကြီး မမျှော်လင့်စေချင်။
သူ့ရဲ့ Pro Mode မှာ ISO 3200 နဲ့ Shutter Speed 20sec ထိ Support ပေးထားတယ်။ ဆိုပေမယ့် Software Support လိုအပ်ချက်လို့ပြောရမလားပဲ၊ Manual (Pro) Mode မှာ Shutter Speed ကြာကြာသုံးရင် ပုံတွေက Camera ဘက်ကို မီးထိုးထားသလို ဖွေးထွက်ကုန်တာတွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ ပုံကောင်းရဖို့ဆိုရင် ISO 100, SS2sec, ဒါမှမဟုတ် ISO 200, SS 1 sec လောက်ထိပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ Pro Mode ထဲမှာ 48MP Mode ပါတယ်၊ သုံးရတာလည်း Note7တုန်းကလို Crash ဖြစ်တာမျိုးမကြုံရပဲ ပုံထွက်လည်း မြန်တယ်။ ဒါပေမယ့် Image Quality ကတော့ 12MP Photo နဲ့ သိပ်ပြီးကွာခြားမှုတော့ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။
5MP Depth Sensor သုံးတဲ့ သူ့ Portrait Mode ကတော့ Edge Detection လေးတွေမဆိုးလှပေမယ့် Photo ရဲ့ Resolution ကို ချပစ်တာကြောင့် Detail တွေကျကုန်တာမျိုးတွေ့ရတယ်။ Selfie ပိုင်းမှာ 20MP ကိုသုံးထားပေမယ့် Quality ပိုင်းမှာတော့ အမြင့်ပိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ 20MP လိုမျိုးတော့ မမျှော်လင့်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ Selfie Portrait ကတော့ Edge Detection အကောင်းကြီးမဟုတ်သလို ပုံကောင်းရဖို့ဆိုရင် အလင်းကောင်းကောင်းရဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ထူးထူးခြားခြားပဲ Note9ရဲ့ Video ပိုင်းကတော့ သဘောကျစရာဖြစ်နေပြန်တယ်။ Back Camera အနေနဲ့ 4K အထိ Support ပေးပြီး Selfie မှာတော့ 1080p အထိ Support တယ်။ သူ့ Video တွေက 16:9 Default ဖြစ်နေတာရယ်၊ Stabilization မရတာရယ်ကလွဲရင် Quality ပိုင်းကတော့ အတော့်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပြောလို့ရတယ်။ ဒီတော့ Camera ကို အဓိကထားပြီးရွေးမယ့်သူတွေအတွက်တော့ Meizu Note9ကို နှစ်ခါပြန်၊ သုံးခါပြန်လောက်တော့ စဉ်းစားစေချင်မိပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ Meizu Note9ဟာ Redmi Note7ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သလား? ဒီမေးခွန်းအတွက် တိကျတဲ့အဖြေကို ပေးနိုင်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ Note9မှာ အားသာချက်တွေအနေနဲ့ Color Accurate ဘက်သွားတဲ့ Display, ကောင်းမွန်တဲ့ Audio Quality, စိတ်ကျေနပ်စရာ Performance နဲ့ Battery Life, Stable ဖြစ်တဲ့ UI စတဲ့အားသာချက်တွေပါဝင်နေတယ်။ တစ်ဖက်ကို ကြည့်ပြန်တော့လည်း သူ့ Design, Camera, Software Support နဲ့ Accessory ပိုင်းတွေက ဝယ်ရမယ့်သူတစ်ယောက်တွက် စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်နေပြန်တယ်။ ဒီတော့ Meizu ရဲ့ Note9ဟာ Redmi Note7ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဆိုတာထက် ၃သိန်းဝန်းကျင်မှာ Note7နဲ့ Xiaomi မကြိုက်သူတွေအတွက် Alternative တွေးချယ်စရာ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Alex Aung at 6:19 AM